ပထ မဆုံး အကြိမ် ကိုယ် ခန္ဓာ ပြောင်းလဲ မှု-MamyPoko Myanmar
ဗိုက်က ကိုယ်ဝန် သည်နှင့် တူလာမည်။
ဗိုက်ထွက် လာပြီး ချမ်းသာ သုခနှင့် ပြည့်စုံသည့် စိတ်ခံစား
မှုဖြစ် လာခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလက လွဲပြီး ခံစား
လို့မ ရပါ။ ဒီချမ်းသာ သုခကို အပြည့် အဝ ပျော်လိုက်
အကြော ပြတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကြီးထွား လာသော ဗိုက်နှင့်
ရင်သား တို့၌ ဖြစ်တတ် ပါသည်။ တီကောင် လိုမျိုး မြင်ရတဲ့
မျဉ်းသည် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် နှောင်းပိုင်း မွေးဖွား မည့်လရောက်လာလျှင် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ် လာသည့် အရာ ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျဉ်း ဘာကြောင့် ဖြစ်လာ တာလဲ？
ဘာ့ကြောင့် အကြောပြတ် ရတာလဲ?
ရုတ်တရက် ဝမ်းဗိုက် ပူလာ သည့်အခါ ကြွက်သားနှင့် အဆီ
မန်ဆန်စွာ မြင့်တက် လာခြင်းကို အပြင် အရေပြား အောက်က အဖွဲ့ အစည်း များက မလိုက်နိုင် ဖြစ်၍ အက်ကွဲ သလို ဖြစ်လာ ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်စွမ်း၊ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်သည် လို့မ ဆိုနိုင် ပေမည့် လည်း ခန္ဓာကိုယ် သေးသည့် သူ၊ အချိန်တို အတွင်း၌ ရုတ်တရက် ကိုယ်အ လေးချိန် မြင့်တက် လာသော သူများ တွင် အဖြစ် လွယ်ပါသည်။ နာကျင်မှု မရှိ ပေမဲ့လည်း ယား ယံခြင်းကို ခံစား ရသည့် သူများ ရှိပါသည်။ ဗိုက်ထဲက ကလေးကို အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိ ပေမဲ့လည်း တကြိမ် အကြော ပျက်မျဉ်း ပေါ်ပြီးလျှင် လုံးဝ မပျောက် ကင်းနိုင်
ပါလို့ ပြောကြ ပါသည်။「အကြော ပြတ်မျဉ်း ရှိခြင်းသည် မိခင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ」ဆိုပြီး စဉ်းစားခြင်း၊ အသား
အရေ၌ အမာရွတ် ထင်ကျန် ခြင်းကို လက်မ ခံနိုင်လျှင် ကြိုတင် ကာကွယ် ခြင်းက ထိရောက် ပါ၏။
အကြော ပြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်
အကြော ပြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန် အောက်ဖော် ပြပါ အချက် ၂ချက်သည် အရေးကြီး ပါသည်။
●ကိုယ်အ လေးချိန် တက်ခြင်းကို သတိထားခြင်း
ကိုယ်ဝန် ရှိချိန်မှ စပြီး အချိန်တို အတွင်း ရုတ်တရက် ကိုယ် အလေး ချိန်မြင့် တက်မ လာအောင် သတိ ထားခြင်းက အဓိက ကျပါသည်။ ဗိုက်ထဲက ကလေး ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်း လာခြင်း၊ ပုံမှန် မဟုတ်သည့် ကိုယ်အ လေးချိန် မြင့်လာခြင်း မျိုးများကို တားဆီး နိုင်အောင် ကယ်လို ရီကို
သတိထား ထိန်းချုပ် သွားရမည်။
●ခရင်ဖြင့် အသား အရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း
အကြော ပြတ်မျဉ်း များသည် အသား အရေ၏ ပြဿနာ။ ဒီပြဿ နာကို ကာကွယ်ရန် မျက်နှာ လိုမျိုးပဲ ဗိုက်ကိုလဲ ရေဓာတ် ထိမ်းသိမ်း ပေးရမည်။ ရေချိုး ပြီးနောက်နှင့် မနက် မျက်နှာ သစ်ပြီး အချိန် များ၌ ဝမ်းဗိုက် ကိုလည်း ရေဓာတ် ထိမ်းသိမ်း သည့် ခရင်များ လိမ်း၍ ပေါ့ပါးစွာ နှိပ်ကြည့်
ရအောင်။ အသား အရေ စိုပြေပြီး ပျော့ပြောင်း နူးညံ့မှု အခြေ အနေကို ထိမ်းသိမ်း ထားနိုင်လျှင် ဝမ်းဗိုက် ကြီးလာသည့် အခါ အရေ ပြားက ပျော့ပြောင်းစွာ ဆန့်ထွက် လာခြင်းဖြင့်
အကြော ပြတ်ခြင်းကို ကာကွယ် လာမည်။ အကြောပြတ်
သည်ကို ကာကွယ်ရန် လိမ်းသည့် အထူး ထုတ်ထားသည့် ခရင် များလည်း ရှိသောကြောင့် လိမ်းကြည့် ကြရအောင်။ ကိုယ်ဝန် ရင့်လာလျှင် ကိုယ့်ဘာ သာကိုယ် မမြင် ရတော့ သည့် ဝမ်းဗိုက် အောက်ပိုင်း များ၌ ဖြစ်ပေါ် တတ်သည် များလည်း ရှိသောကြောင့် ဗိုက်တ ခုလုံးကို အစိုဓာတ် ထိမ်းပေး ခြင်းက အဓိက အချက် ဖြစ်၏။
တကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင် လုံးဝပျောက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်၌အနီသန်း သည့်ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း မွေးဖွားပြီးနောက်၌ အဖြူရောင်ဖြစ်လာပြီး တဖြေးဖြေးဖျော့သွားသည်။ အကြောပြတ်မျဉ်းများပေါ်လာပြီးနောက်လည်းပဲ အစိုဓာ တ်ထိမ်းပေးသည့်ခရင်များလိမ်းခြင်း၊နှိပ်နယ်ခြင်းများပြု လုပ်ပေးလျှင် သိသာလာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော ကြောင့် အရေးကြီးတာက လက်မလျော့ဖို့ပါ။
ရင်သား ပြောင်းလဲမှု ဘယ်အ ချိန်မှာ စတာလဲ?
ကိုယ်ဝန် ရှိခြင်း လက္ခဏာ အနေဖြင့် နို့သီး ခေါင်းသည်
ထိခိုက် နာကျင် လွယ်လာ သည့်သူ လည်းရှိ ပါသည်။ တဖန် ကိုယ်ဝန် ရှိလာ သည်နှင့် တပြိုင်တည်း နို့သီး ခေါင်းနှင့် ရင်သား တဝိုက် အရောင် ရင့်လာခြင်း။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ် နို့ရည် မထွက် သော်လည်း ရင်သား ကတော့ ကြီးလာမည်။ ရင်သား တဝိုက် ပြောင်းလဲ လာမှုကို ကြည့်ကြည့် ကြရအောင်။
နို့သီး ခေါင်းနှင့် နို့သီးခေါင်း တဝိုက် ပြောင်းလဲ မှုသည်
ကိုယ်ဝန် ရှိခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်နေ ခြင်းက လည်းမနည်းပါ
ဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန် ရှိပြီး ချက်ချင်း ပြောင်းလဲမှု စတင်
သည့် နူးညံ့သော အစိတ် အပိုင်းလည်း ဖြစ်၏။
ကိုယ်ဝန် ရှိခြင်း လက္ခဏာ အနေနှင့် မြင်ရသည့် နို့သီးခေါင်း
နှင့် နို့သီးခေါင်း တဝိုက် ပြောင်းလဲ မှုသည် အောက်ဖော် ပြပါ
နို့သီး ခေါင်းသည် အောက်ခံ အင်္ကျီ၊ အဝတ် အထည်တို့ ဖြင့်ထိ မိရုံဖြင့် မသက် မသာ ခံစား မိခြင်း၊ စူးရှသည့် ခံစားမှု ဖြစ်ခြင်း များရှိ တတ်ပါသည်။ နို့လမ်းကြောင်း ဖွံ့ဖြိုး လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင် ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော ဟော်မုန်းဓာတ် ညီမျှမှု အပြောင်း အလဲကြောင့် မယ်လမင်း မြင့်တက် လာခြင်းက အမဲရောင် ဆိုးလိုက် သလို ရင့်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
※ ဒီအချိန် (ကိုယ်ဝန် ၁၅ပတ် အတွင်း) မတိုင်ခင် ရင်သား
ကင်ဆာ စစ်ဆေး မှုကို အပြီး လုပ်ထား ကြရအောင်!
ကိုယ် စ-လယ်-နှောင်း ပြောင်းလည်းမှု ?
ရင်သား တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာမည်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် နို့ရည် ထွက်တာလဲ မဟုတ် ပဲနှင့် ဘာကြောင့် ကြီးလာ တာလဲ ဆိုရင် နို့ဂလန်း များ တဖြည်းဖြည်း ပို့လွှတ် ခြင်းနှင့်
တချိန် တည်း၌ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး အဆီလည်း များလာလို့
ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ ချိန်ရဲ့ ရင်သား ပြောင်းလဲ မှုသည် အောက်ဖော် ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရင်သား ကြီးလာ ခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက် လိုမျိုး အကြော ပြတ်ခြင်းများ ဖြစ်လာ နိုင်သောကြောင့် ရင်သားအား အစို ဓာတ်ထိမ်း ပေးသည့် ခရင်များဖြင့် အသား အရေ ထိမ်းသိမ်း
နို့ဂ လန်းများ ပို့လွှတ် မှုကြောင့် နို့သီးခေါင်း ဆီသို့ နှိုးဆွမှု ဖြစ်စေပြီး အနည်း ငယ်သော နို့ရည် (အဖြူရောင် နို့ရည်စိမ်
ထွက်လာ သည့်အရာ) ထွက်လာ ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
ရင်သား (နို့သီးခေါင်း) အားဘယ်လို ဂရုစိုက်မလဲ？
အမေရဲ့ နို့ရည်သည် ကလေးငယ် အတွက် အကောင်းဆုံး သော အဟာ ရဓာတ် ဖြစ်လာမည်။
မွေးဖွား ပြီးနောက် ချောမွေ့ စွာဖြင့် နို့ရည် တိုက်ကျွေးမှု စတင် ရန်အတွက် ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် အတွင်း ရင်သားနှင့် ရင်သား တဝိုက်အား ဂရု တစိုက် ပြုလုပ် ပေးခြင်း ကလည်း အရေးကြီး ပါသည်။
ဘာကြောင့် ဂရု စိုက်ဖို့ လိုတာလဲ?
မွေးဖွား ပြီးနောက် မိခင် ရင်သားသည် သဘာဝ အတိုင်း နို့ရည်ဖြင့် ဖောင်းလာ ပေမဲ့ နို့ထွက်ပုံ ထွက်နည်း ကတော့
တဦးနှင့် တဦး ကွာခြားချက် ရှိသည်။ နို့ထွက်ပုံ မတူ ရသည့် အကြောင်း ပြချက် ကတော့ နို့သီးခေါင်း ပုံသဏ္ဍာန် မတူညီ ခြင်း၊ နို့ဂရင်း (နို့ပိုက်) ၏ စီးဆင်း ဖြတ်သန်း မှုကြောင့်လို့ ပြောနိုင် ပါသည်။
နို့သီးခေါင်း ပုံစံ သည်လည်း တယောက် တမျိုး။ ဒါပေမဲ့
ကလေးငယ် အတွက် ကတော့ စို့ရ လွယ်သော ပုံစံနှင့် မလွယ်သော ပုံစံ ရှိတဲ့ ပုံပါပဲ။ နို့သီး ခေါင်းက ကျုံ့နေခြင်း ပြားနေ ခြင်းများ ဖြစ်နေလျှင် ကလေး အတွက် နို့စို့ ဖို့ခက် စေပါသည်။
●နိုိ့ဂရင်းနှင့် နို့ထွက်ပေါက် အခြေအနေ
နို့ဂ ရင်းနှင့် နို့ထွက် ပေါက်က ပိတ်နေ သောကြောင့် မိခင်
နို့စီး လမ်းကြောင်း မကောင်းလျှင် အထွက် မကောင်းခြင်း
နို့သီး ခေါင်းနှင့် ရင်သား တဝိုက်အား စောင့်ရှောက်ခြင်း?
ကလေး ငယ်က သောက်ရ လွယ်ပြီး မိခင် နို့ရည် အထွက်
ကောင်းသော ရင်သား ဖြစ်အောင် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်
အလယ်ပိုင်း (၂၀ပတ် လောက်) မှစ၍ နို့သီး ခေါင်းနှင့် ထိုအနီး တဝိုက်အား နှိပ်နယ် ပေးကြ ရအောင်။ တဖန် ကျုံ့နေခြင်း၊ ပြားနေ ခြင်းကို ပြင်ဆင်ရန် အတွက် ကိရိယာ
● နို့သီး ခေါင်းအား နှိပ်နယ်မှု
နို့သီး ခေါင်းနှင့် ထိုအနီး တဝိုက် နှိပ်နယ် ခြင်းကို ရေချိုး ပြီးနောက် လုပ်လျှင် အသား အရေက နူးညံ့ပြီး ထိရောက် မှုရှိ၏။
. လက်တ ဖက်နှင့် ရင်သားကို ကိုင်၍ တခြား တဖက်ရဲ့ လက်ချောင်း များဖြင့် ရင်သား တဝိုက် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဘယ်ညာ နည်းနည်း ချင်းစီ နှိပ်နယ် ရမည်။
. ရင်သား တဝိုက် ဧရိယာ ပျော့ပျောင်း လာလျှင် နို့သီး ခေါင်းဆီသို့ ဆွဲထုတ် သလို ဖြည်ထုတ် ရမည်။
. နို့သီး ခေါင်းကို ဖျစ်၍ ဖြေးညင်း စွာဆွဲထုတ်ရမည်။
※ နှိပ်နယ်မှု မစ တင်ခင် လက်နှင့် ရင်သားအား သန့်စင် ထားပါ။ တဖန် နို့သီး ခေါင်းအား နှိုးဆွမှု လုပ်ပေးလျှင် ဝမ်းဗိုက် ကျယပြန့် လာခြင်း များရှိ တတ်သောကြောင့် အဲ့လို အချိန်၌ ချက်ချင်း ရပ်လိုက်ပါ။
ဘာကြောင့် ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ် ပါသလဲ?
ကိုယ်ဝန် လက္ခဏာ ရောဂါ ဖြစ်ချိန် လွန်သွားလျှင် ကိုယ်ဝန် မရှိ ခင်ထက် ဗိုက်ပို စာတတ် ပါသည်။
ဒါပေမဲ့「ကလေးနှင့် နှစ်ယောက်စာ」သည် အရင်က ပုံပြင်။
အစား အသောက် ပေါကြွယ် ဝသော ယနေ့ ခေတ်ထဲမှာ သင့်တော်သော ပမာဏ နှင့် အဟာရ ဓာတ်မျှ တမှုက အရေးကြီး ပါသည်။
ကိုယ်အ လေးချိန် မြင့်တက် ရခြင်း အကြောင်း အရင်းက?
ကလေး ငယ်သည် 3Kg ပတ်လည်ဖြင့် မွေးဖွား လာပေမဲ့
ကိုယ်အ လေးချိန် တိုးပြီး မွေးလာ ခြင်းသည် ဘာကြောင့် ပါလဲ?
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် ကိုယ်အ လေးချိန် မြင့်တက် ခြင်း၌
အကြောင်း ရင်းရှိပြီး အသေး စိတ်ကတော့ အောက်ဖော် ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
● သန္ဓေသား အလေးချိန် 3kg နီးပါး
● အချင်း အလေးချိန် 3kg နီးပါး
● ရေအ မွှာအိတ် အလေးချိန် 0.5kg နီးပါး
● ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မြင့်တက် လာသည့် သားအိမ်၊ ရင်သား၊
သွေး အစ ရှိသည် တို့၏ အလေးချိန် 4kg နီးပါး
အဲဒါတွေ အားလုံးပေါင်း လိုက်လျှင် 8kg နီးပါး ဖြစ်လာမည်။
အဲ့ဒီမှာ ထပ်ပေါင်း ရမှာ ကတော့ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟော်မုန်းဓာတ် အပြောင်း အလဲကြောင့် တိုးလာ
သည့် အဆီနှင့် ရေဓာတ် စုပုံခြင်း ဖြစ်၏။
ဘာကြောင့် မြင့်တက် လာရ တာလဲ?
ကိုယ်အလေး ချိန်မြင့် ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော ဆိုးကျိုး များကတော့ အောက်ဖော် ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်။
● ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်၌ သွေးတိုး ရောဂါနှင့် ဆီးချို ရောဂါ အစရှိ သည်များ ပေါင်းစပ် ဖြစ်ပွား လွယ်ပါသည်။
● မွေးဖွား ချိန်၌ ဝမ်းဗိုက် နာကျင်မှု သိပ်မ ရှိခြင်း ကလည်း အကြောင်း အရင်း တရပ် ဖြစ်ပါသည်။
● အဆီ များလျှင် မွေးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းလာခြင်း၊ ကလေးက ထွားလွန်းလျှင် မီးဖွား ရခက်ခြင်း များလည်း ရှိသည်။
အလေးချိန် နည်းလွန်း လျှင်လည်း ပြဿနာ
။တဖက် တွင်လည်း ဒီနှစ်ပိုင်း အတွင်း၌ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်
ရှိရမည့် အသင့် တော်ဆုံး ကိုယ်အ လေးချိန် ထိတိုး မလာ သော မိခင် ဦးရေ မြင့်တက် လာနေသည်။
「သေးသေး လေးမွေးပြီး ကြီးထွား လာအောင် ပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်း」သည် လွယ်ကူစွာ မွေးနိုင်ဖို့ စကား တခုဖြစ်ပေမဲ့ အစွန်း ရောက်အောင် ထိန်းချုပ် ထားရင်တော့ ကီလို မပြည့်သော (2500g မပြည့်) ဖြစ်လာမည်။
ဘယ်ကိစ္စ မဆို သင့်တင့် မှုသာ အရေးကြီး သောကြောင့် ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းချုပ်ရန် အစွမ်းကုန် လုပ်လွန်းပြီး လိုအပ်သော အာဟာရ အထိ ထိန်းချုပ် လွန်းခြင်း မျိုးမ လုပ်မိအောင် အာရုံ ထားစေ ချင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်၌ သင့်တင့်သော ကိုယ်အ လေးချိန်ကို ထိမ်းသိမ်း ထားဖို့ဆိုတာ？
ဒါဆိုရင် လက်တွေ့ ကျကျ ကိုယ်အ လေးချိန် ထိမ်းသိမ်း မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြည့်ကြည့် ကြရအောင်။ အဓိက အချက် ကတော့ အစား အစာ ပမာဏ ထက်ညီ မျှမှု။ အပေါင်း..သင့်တင့် သောကိုယ် လက်လှုပ် ရှားမှု ဖြစ်၏။
မီးဖွား မည့်လ၌ ရှိရမည့် ကိုယ်အ လေးချိန် ပျမ်းမျှ မြင့်တက်မှု？
၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ ကျန်းမာ ရေးနှင့် အလုပ် သမား ဝန်ကြီး ဌာန ကထုတ် ပြန်ထား သည့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် ကိုယ်အ လေးချိန် မြင့်တက်မှု ပျမ်းမျှ ခြင်းက အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအရာ ကတော့ BMI (Body Mass Index) လို့ခေါ်သော
ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် ဖြင့် ခွဲခြား ထားပါသည်။
● ပိန်တဲ့ အမျိုး သမီး (BMI=18.5 မပြည့်) 9~12kg
● ပုံမှန် အမျိုး သမီး (BMI=18.5~25မပြည့်) 7~12kg
● အဝ လွန်သည့် အမျိုး သမီး (BMI=25 ကျော်) သီးခြား တုံ့ပြန်မှု (အကြမ်းဖျင်း 5kg လောက်)
※ BMI (ကိုယ်အ လေးချိန် (kg) ÷ အရပ် (m))2ဖြင့် တွက်ပါသည်။
သင့်တင့်သော ကိုယ်အ လေးချိန် ထိမ်းဖို့ ဆိုတာ?
【ကိုယ်အ လေးချိန်ကို အသေး စိတ်တိုင်း တာမည်။】
ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းချုပ် မှု၌ အရေး ကြီးဆုံး ကတော့ လက်ရှိ အခြေ အနေကို သိခြင်း ဖြစ်၏။ ကိုယ်ဝန် ရှိမနေ
သည့်အ ချိန်လည်း အတူတူ ပါပဲ။ ပုံမှန် အားဖြင့် အနည်းဆုံး တပတ် တကြိမ် ပေါင်ချိန်၍ ကိုယ်အ လေးချိန် ပြောင်းလဲ မှုအား မှတ်ထား ကြရအောင်။ ဖြစ်နိုင် လျှင်တော့ ဇယား ဆွဲပြီး မြင်နိုင်မည့် နေရာ၌ ကပ်ထား ရင်အ ကောင်းဆုံး ပါပဲ။
【တပတ် တွင်း 300g အထက် မကျော် ရဘူး】
တပတ်တွင်း ကိုယ်အ လေးချိန် တိုးရင်လည်း အများဆုံး 300g ထိ၊ 500g ထက်တိုး လာလျှင် သတိ ထားဖို့ လိုအပ် ပါသည်။ ဒီလောက်ထိ အသေးစိတ် စစ်ဖို့ရန် ခက်ခဲတယ် ထင်တဲ့ သူကတော့ တလကို 1kg ထိကို အကြမ်းဖျင်း ထားပြီး ထိန်းချုပ် သွားကြ ရအောင်။
【ကိုယ်ဝန် ရှိစ အော့အန် မှုပြီး ဆုံးလျှင် တနေ့ ၃ကြိမ် သေချာ စားပြီး သရေ စာစား ခြင်းကို လျော့ချပါ】
<pဗိုက်စာ လို့ဆိုပြီး ဆက်တိုက် သရေစာ စားခြင်းကို မလုပ် ပါနှင့်။ အစာစား ချိန်၌ ဖြစ်နိုင် သလောက် သေချာစွာ အဟာ ရဓာတ် အပြည့် ယူထား ရအောင်။ ခင်ပွန်းသည် အိမ်ပြန် နောက်ကျပြီး ညစာကို လင်မယား အတူ စားဖို့ အတွက် စောင့်နေ ရသည့် အချိန်ကို သည်းမခံ
နိုင်သူ ဆိုရင် သုံးနပ် စာကို လေးကြိမ် ခွဲစားဖို့ တိုက်တွန်း ပါသည်။ ညနေ ပိုင်း၌ အစာပြေ မုန့်စားပြီး ညစာကို ခင်ပွန်း
ထက် အရင် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး စားထား ကြရအောင်။
【ပမာဏ ထက်မျှ တမှုကို စဉ်းစားပါ 】
သကြား ဓာတ်နှင့် အဆီ ဓာတ်များက ကိုယ်အ လေးချိန် တိုးခြင်းနှင့် စပ်ဆက် နေသောကြောင့် ရှောင်ကျဉ် ရအောင်။ ဆားဓာတ် သည်လည်း ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် သွေးတိုး ခြင်း၏ အကြောင်း တရပ် ဖြစ်၏။ အစား အသောက်များ လွန်ကဲစွာ စားသောက်ခြင်း နှင့်လည်း ဆက်စပ် နေသော ကြောင့် တတ်နိုင် သလောက် လျော့စား ကြရအောင်။ မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ကလေး အတွက် လည်းပဲ ညီမျှစွာ စားသောက် ခြင်းက အရေး ကြီးသော ကြောင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် များများ စားပြီး ပရို တိန်းဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ ကယ်လ်ဆီ ယမ်ဓာတ် ရယူရန် လုပ်ဆောင် ကြရ အောင်။
【သင့်တော်သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရန် သတိပြုရအောင် 】
「ကိုယ်ဝန် သည်က ငြိမ်ငြိမ် သက်သက်」လို့ဆို ကြပေ မဲ့လဲ သင့်တော်သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ပြုရန် လိုအပ် ပါသည်။ လမ်းလျှောက် ခြင်းသည် မိခင်ကော ကလေးပါ ဘာဆိုး ကျိုးမှ မရှိ သောကြောင့် ကိုယ်ဝန် တည်ငြိမ်သွား လျှင် နေ့တိုင်း ၁နာရီ လောက် လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း များကို ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်း ပါသည်။ နေ့စဉ် လုပ်နေကျ အိမ်အ လုပ်လည်း OK ပါ၏။
ယခု တလော သင့်တင့်သော ကိုယ်အ လေးချိန် ရှိပေမဲ့ ကြွက်သား အားနည်း သောကြောင့် မီးဖွား ရခက်သော သူလည်း မြင့်တက် လာသည် လို့သိ ရပါသည်။ သင့်တင့် သည့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှုသည် ကယ်လိုရီ ချေဖျက် ဖို့တင် မဟုတ်ပဲ ကြွက်သား တိုးလာပြီး မွေးဖွားရန် ပြင်ဆင် မှုလည်း ဖြစ်လာသည်။
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိမ်အ လုပ်လုပ် ခြင်းများ ပြုလုပ် ပေမဲ့လည်း ကိုယ်အ လေးချိန် ဆက်လက် မြင့်တက် နေသော သူက ဆရာ ဝန်၏ ညွှန်ကြားချက် ယူပြီး ရေကူး ခြင်း၊ အေရိုး ဗစ်လုပ် ခြင်းများကို စမ်းသပ် လုပ်ကြည့် တာလည်း ကောင်းပါ၏။
「 ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းချုပ် ရခြင်းသည် ပင်ပန်းသည်」 လို့ထင်မိ ပေမဲ့လည်း မိခင်နှင့် ကလေး ၂ယောက် လုံးအ တွက် အရေး ကြီးသော ကျန်းမာရေး ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်၏။ 「တန်ဖိုး ရှိသော ဗိုက်ထဲက ကလေး လေးက ကျန်းမာ သန်စွမ်းစွာ မွေးဖွား လာဖို့ အတွက်」လို့ စဉ်းစားပြီး ခြေသုံး ချောင်းဖြင့် လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်လျှင် ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းချုပ် မှုသည် ပျော်စရာ ကောင်းလာ မည်။